चितवनमा कोरोना सङ्क्रमित दिनहुँ बढे – ainapati
चितवनमा कोरोना सङ्क्रमित दिनहुँ बढे
भरतपुर । चितवनमा कोरोना सङ्क्रमित दिनहुँ बढिरहेका छन् । सङ्क्रमित बढेसँगै लक्षण देखिने र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीसमेत बढिरहेका छन् । गम्भीर खालका बिरामी बढेसँगै मानवीय क्षति हुन सक्ने आँकलन चिकित्सकहरुले गरेका छन् ।
‘पहिलेका तुलनामा अहिले लक्षण देखिएका बिरामीहरु बढिरहेका छन्’, भरतपुर अस्पतालका कोभिड–१९ उपचारका फोकल पर्सन डा. प्रमोद पौडेलले भने, ‘पछिल्लो समयमा २० प्रतिशतभन्दा बढी सङ्क्रमितहरुमा कोरोना भाइरसको कुनै न कुनै लक्षण देखिएको छ ।’ उनका अनुसार चितवनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण डरलाग्दो बन्दै गइरहेको छ ।
‘यसअघि क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसमा देखिएको कोरोना डरलाग्दो थिएन, पछिल्लो समय समुदायमा देखिएको कोरोना डरलाग्दो बन्दैछ’, डा. प्रमोद पौडेलले भने, ‘समुदायभित्र सल्केको कोरोना सङ्क्रमितमा बढी लक्षण छ ।’
उनका अनुसार यतिबेला चितवनमा आठ जना कोरोना सङ्क्रमित गम्भीर प्रकृतिका छन् । आठ जनामध्ये सात जना गम्भीर कोरोना बिरामीको भरतपुर अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनीहरुको आइसियूमा राखेर उपचार भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दीपक तिवारीले चितवनका सङ्क्रमितहरुमा पछिल्लो समय लक्षण देखिन थालेको बताए । उनले भने, ‘लक्षणविहीनका सङ्क्रमित बढी छन्, तर पनि लक्षण देखिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ ।’ उनका अनुसार चितवन जिल्लाका सङ्क्रमितहरुमा रूघाखोकी, ज्वरो, पखालालगायतका लक्षण देखिएको छ ।
४८८ पुगे सङ्क्रमित
चितवनमा कोरोना सङ्क्रमितको संख्या ४७१ पुगेको छ । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार जिल्लामा कुल सङ्क्रमितमध्ये ८५ जना स्वास्थ्यकर्मी छन् ।
हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित भरतपुर महानगरका २८७, माडीका ५०, रत्ननगरका ३९, राप्तीका ७५, खैरहनीका २९, कालिका नगरपालिकाका पाँच र इच्छाकामना गाउँपालिकाका दुई जना रहेका छन् ।
लक्षण देखिएकालाई प्राकृतिक चिकित्सालयमा राखिने
भरतपुर–१ मा रहेको योगी नरहरिनाथ प्राकृतिक चिकित्सालयमा लक्षण देखिएका कोरोना सङ्क्रमितलाई राखिने भएको छ । लक्षण देखिएका सङ्क्रमितका बिरामी राख्नका लागि व्यवस्थापन पूरा भइसकेको छ । अस्पतालमा भरतपुर महानगरको आर्थिक सहयोगमा तत्काल ७५ जनाको उपचार गर्न सकिने क्षमतामा पूर्वाधार विकास गरिएको छ ।
कोरोना पोजेटिभ देखिएका र सामान्य लक्षण भएका बिरामीलाई राखेर उपचार गरिने प्राकृतिक चिकित्सालयका निर्देशक डा. हेमराज कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार सङ्क्रमणको लक्षण देखिएका बिरामीलाई राख्नका लागि ६ वटा ब्लक उपलब्ध गराइएको छ ।
भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले प्राकृतिक चिकित्सालयसँग सहकार्य गरी आइसोलेसन तयार पारिएको बताइन् । उनका अनुसार अस्पतालको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम सकिएको छ ।
भरतपुर महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यकताअनुसारको अनुदान सहयोग गर्नेछ । उपचारमा रहेका सङ्क्रमितहरुको खानाबापतको शुल्क नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको रकम चिकित्सालयलाई महानगरले उपलब्ध गराउने छ । योगा, ध्यान, उपचारदेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सबै चिकित्सालयले गर्नेछ । शान्त वातावरणमा प्राकृतिक विधि र पद्धति अपनाएर कोरोनाको उपचार गरिने हुनाले बिरामीको मनोबल उच्च हुने चिकित्सालयले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरि ठगी गर्ने ३जना पक्राउ, ६ जना फरार
अर्बपति तथा सांसद विनोद चौधरीलाई कोरोना संक्रमण